Tetik’asa Fihariana : Hisitraka izany koa ny faritra Vakinakaratra
Nisitraka voalohany ny famatsiam-bola ireo tetik’asa Fihariana ireo tantsaha ao Andranomanelatra sy Manandona omaly.
Teny amin’ny tontolo ambanivohitra, teny anivon’ireo tantsaha mpiompy no nisafidianana ireo voalohany nahazo ny tohana ho amin’ny fandraharahana avy amin’ilay teik’asa FIHARIANA
Fandaharan’asam-panjakana DEFIS : Novatsiana vola valo hetsy dolara ireo tantsaha
Tantsaha maherin’ny 5000 ao amin’ny faritra Amoron’i Mania Sy Matsiatra Ambony ary Ihorombe no hiroso amin’ny famokarana matihanina sy mitodika amin’ny tsena anatiny.
Vondron’ny tantsaha rejionaly miisa 10 no nisitra ny famatsiam-bola valo hetsy dolara avy amin’ny fandaharan’asam-panjakana DEFIS.
Delestazy : Nihena 70% tao antin’ny enim-bolana
Nihena hatramin’ny 70% ny tahan’ny fahatapahan-jiro, tao anatin’ny enim-bolana izao. Mbola maro anefa ny ezaka fanatsarana famatsiana herinaratra tokony atao.
Tanàna 19 no mbola ahitana delestazy amin’izao fotoana, raha toa ka 55 izany, enim-bolana lasa izay.
Fandraisana zava-mahadomelina: Mampitotongana ny toe-karena ihany koa
Isan’ny itataovan’ny loza aterakin’ny fifohana sigara sy ny zava-mahadomelina ny toe-karena, ankoatra ny tsy fahasalamana mpitranga matetika. Maherin’ny 491 miliara ariary isan-taona ny vola lany noho izany.
Tsy avela mividy sigara sy zava-mahadomelina ireo zaza tsy ampy taona. Norarana ny dokambarotra momba azy ireny. Tsy azo atao ny mifoka ankalamanjana sy amin’ireo toerana iraisan’ny daholobe. Ary nampiakarina ny hetra alaina amin’ny sigara.
Parc Ankarafantsika : Ringana tsikelikely ny ala
Ala an-jatony hekitara ao Ankarafantsika no ringana tanteraka ankehitriny, raha ny tatitry ny tomponandraikitra any an-toerana.
Mahatratra 135 000 ha ny velaran’ny valan-javaboahary Ankarafantsika, any amin’ny lalam-pirenena faha efatra. Voafaritry ny distrika roa ny faritra arovana, dia ny distrikan’Ambato Boeni sy ny distrikan’i Marovoay ao anatin’ny faritry Boeny.
Mbola mampitarazoka ny fanantanterahina ny politikam-pampandrosoana eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny volam-panjakana na efa maro aza ny loharanom-bola eto amintsika. Azo atao tsara anefa ny manainga ny asa fampandrosoana amin’ny alalan’ny fampiarana politika matotra momba ny hetra amin’ny alalan’ny fanamafisana ny politikam-pitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto amin’ny firenena.